वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन ! - Namasteholland, News, Information and Technology
काठमाडौं । वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन भएको छ । पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित देवकोटाको आज साँझ बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा ५ बजेर ३५ मिनेटमा निधन भएको हो । लामो समय बेलायतको किङस कलेज हस्पिटलमा उपचार गराए पनि निको नहुने निश्चित भएपछि डा. देवकोटा आफ्नै देशमा प्राण त्याग गर्ने भन्दै बैशाख १५ गते नेपाल फर्किनु भएको थियो ।
२०१० साल पुस ४ गते गोरखाको पण्डितगाउँमा जन्मिनुभएका डा. देवकोटाले चिकित्सा क्षेत्रमा ३४ बर्ष बिताउनु भएको थियो । श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि डा. देवकोटाको पार्थिक शरीर भोलि विहान ८ बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म बासबारीस्थित न्यूरो अस्पतालको प्राङ्गणमा राखिने अस्पताले जनाएको छ ।
त्यसपछि विद्युतीय माध्यमबाट दाहसंस्कार गरिने बताइएको छ । डा. देवकोटाको श्रीमति र तीन छोरी छन् । डा. देवकोटाले वीर अस्पतालबाट मुलुकमा स्नायु शल्य चिकित्साको विस्तार गर्नुभएको थियो ।
वीर अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी विभाग स्थापना गर्नुभएका उहाँले आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा रुपान्तरण गर्नुभएको थियो । देवकोटाले सात महिना स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको थियो ।
news source news24
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा आइतबार यात्रुवाहक जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो। सात �
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ �
पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजकीय सम्मानकासाथ अन्त